रेडबुलजस्ता इनर्जी ड्रिक्स खानेहरु होसियार ! | Jukson
तत्कालका लागि शक्ति प्रदान गर्ने इनर्जी ड्रिंक्सको सेवनले स्वास्थ्यलाई कमजोर बनाउने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनका अनुसार मध्यम साइज कप कफीमा करिब एक सय ५० मिलिग्राम क्याफिन हुने गर्छ, जबकी इनर्जी ड्रिंक्समा भने यसको मात्रा पाँच सय ग्रामसम्म हुने गरेको पाइएको छ ।
यी दुई मध्ये कुनै एक ठीक भन्ने नभएपनि इनर्जी ड्रिंक्समा पाइने असाधारण क्याफिनको मात्राले स्वाथ्यलाई कमजोर बनाउन मद्दत गर्ने भएकाले यसमा व्यापक बहसको आवश्यकता रहेको डाक्टरहरुको भनाई छ ।
इनर्जी ड्रिंक्समा मानव स्वास्थ्यमा असर गर्नसक्ने तत्व अत्यधिक पाइने अध्ययनले देखाएपछि भारतको फुड सेफ्टी र स्टान्डर्ड अथोरिटी अफ इन्डीयाले मुलुकमा त्यस्ता इनर्जी ड्रिंक्सको उत्पादन तथा बेचबिखनमा समेत रोक लगाएको छ ।
यसमा पाइने क्याफिनले मानव शरीरमा असर गर्ने रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि भारतले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसको नियमित सेवनले मानिसलाई लत बसाउने अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘जसरी, धुम्रपान मध्यपानको सेवनले मानिसमा लत बसाल्छ त्यस्तै यसमा पाइने तत्वले पनि मानिसलाई सेवनको लत बसाल्छ ।’
कन्सल्टेन्ट साइक्याटीस्ट डा. मनिश गुप्ताका अनुसार युवाहरुले विशेष गरी परीक्षाको समय तथा साथीसँग हुँदा इनर्जी ड्रिंक्स प्रयोग गर्ने गर्छन् । विस्तारै उनीहरुले यसको लत बस्न थाल्छ । गुप्ताले आफुसँग इनर्जी ड्रिंक्स प्रयोग गर्ने विरामीहरु आउने गरेको र उनीहरुमा निद्रा नलाग्ने, चर्काे प्रकाश अगाडी पर्दा इरिटेट महसुस हुने लगाएतका समस्या रहेको बताए ।
नेशनल इन्सटीच्युट अफ साइक्याट्रीमा कार्यरत डा. निखिल राहेजाका अनुसार कतिपय कम्पनीहरुले त यस्ता पदार्थको उत्पादन गर्न सहि कम्पोजिसन समेत उल्लखे नगर्ने गरेको बताउँछन् । उत्पादक कम्पनीसँग यस विषयमा जानकारी माग्दा झारा टार्ने जवाफ दिने गरेको डाक्टरहरुको भनाई छ । बरु आफ्नो उत्पादनको बारेमा बढाइचढाई विज्ञापन तथा प्रवद्र्धन गरेको डाक्टरहरुको आरोप छ ।
तर यस्ता पदार्थले गहिरो मानसिक समस्या उत्पन्न गराउने विज्ञहरुको दाबी छ ।
बलिउड फिल्मलाई अब सय करोड सामान्य